Fa maninona no mila PC isika raha manana iPad Pro? | Vaovao IPhone
Fa maninona no mila PC isika raha manana iPad Pro?
Io no fanontaniana apetrak'i Apple amin'ny fisalasalana momba ny mpampiasa rehetra mividy PC na mitsambikina avy hatrany ao amin'ny iPad Pro vaovao. Amin'ity tranga ity dia fanambaràna vaovao momba ny matanjaka indrindra amin'ny iPad, maodely 10,5-inch, izay anaovan'ny zazavavy asa rehetra izay heverina fa azontsika atao amin'ny PC.
Tsy isalasalana fa ny fanoloran-tenan'i Apple amin'ny rafitra fiasan'ny iOS dia natanjaka hatry ny ela ary mazava ho azy fa te hampitombo ny varotra ny iPad Pro vaovao dia tsy zavatra ratsy, saingy marina fa mandritra ny fotoana miresaka momba azy io ho tena mpisolo toerana ny PC na ny an'ny MacBook fototra aza, mety ho zavatra mampiahiahy farafaharatsiny.
Ny doka vaovao izay natombok'izy ireo raha nampitaha ny iPad tamin'ny PC iray dia mety "tsy dia tena izy" ary io koa dia ny manipy vato amin'ny tafony rehefa manana ianao MacBook izay mitentina mitovy amin'ny iPad Pro miaraka amin'ireo kojakoja rehetra voatanisa ao amin'ny doka. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fahitanao ny doka sy ny fanatsoahan-kevitrao:
Tsy miresaka ratsy momba ny solosaina koa izy ireo ary mieritreritra aho fa tsy fampitahana mivantana amin'ny PC na Mac izany mandra-pahatongan'ny fotoana farany amin'ilay fanambarana, rehefa manontany izy ireo: Inona no ataonao amin'ny solosainao? ary hoy ny navaliny: Solosaina inona?
Marina fa mety hitarika hieritreritra izany fa amin'ny fividianana ny iPad Pro dia ananantsika izay rehetra azon'ny solosaina omena antsika, na dia ao amin'ny faritra web misy ny iPad Pro aza dia afaka mamaky isika: «Na inona na inona ataonao, miaraka amin'ny iPad Pro vaovao dia manaingo azy ianao. Satria mahery lavitra noho ny ankamaroan'ny kahie PC izy io ary tena mora ampiasaina. " izay midika fa io iPad io dia mazava ho solon'ny solosainao. Ary indray ny orinasa dia mifantoka amin'ny filazana fa noho ny herin'ireo iPad ireo Pro (ary ny kitendry miaraka amin'ny Apple Pencil, izay tsy tafiditra ao anatin'ny vidiny) dia azonao atao ny manao ny asa rehetra ataontsika amin'ny PC. Antenaiko manokana fa tsy hiresaka izany aho, ary olona iray monja no fantatro afaka manakalo ny PC-na Mac ho an'ny iPad Pro, Federico Viticci, avy amin'ny MacStories.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fa maninona no mila PC isika raha manana iPad Pro?
Ny iPhone X dia nandany ny famandrihana tao anatin'ny 3 minitra tao amin'ny faritanin'i Samsung